पैदल यात्रा पुरा गरेका कार्की अब साइकल यात्राको तयारीमा – Ramro Sandesh पैदल यात्रा पुरा गरेका कार्की अब साइकल यात्राको तयारीमा – Ramro Sandesh
काभ्रेपलाञ्चोक, अभिनय कार्की एक ले स्वभावका व्यक्ति हुन् । दोलखा जिल्लाको कालिञ्चोक गाउँपालीका वडा नः ३ घर भएका कार्कीले विश्वभर सुख, शान्ति,समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको कामना” सहित सय भन्दा बढी देशहरुको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर एक्लै नेपालको पूर्वी प्रवेश द्घार झापाको मेची पुल बाट पश्चिमको महाकाली सम्म लगातार एकलै ३७ दिन हिडेर पैदल यात्रा पुरा गरेका छन् । गत फाल्गुन ६ गते आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर झापा जिल्लाको मेची पुल बाट आफ्नो पैदल यात्रा सुरु गरेका उनले २ महिनामा सक्ने योजना राखेका थिए । कार्कीले त्यो भन्दा अगाडीनै यात्रा सम्पन्न गरेका छन् । पछिल्लो परिवेसमा युवापुस्ताहरु फ्रस्टेशन, डिप्रेशन लगायत लागू औषध र कुलतको सिकार बनिरहेकोले आफू चिन्तित बन्दै उनिहरुलाई ती त्यस्ता कुलतहरु बाट छुटकारा मिलोस र देश विकासका निम्ति जागृत र सक्रिय बनुन भन्दै कामना सहितको अभियानको सुरु गरेका थिए । कुनै समय रेडियो तथा अनलाइन मिडियामा समेत काम गरेका अभिनय यतिबेला एउटा नयाँ जोस र जागरणका साथ आफ्नो यात्रामा निरन्तरता दिई रहेका छन् । । उनले यात्रालाई सपन्न गरे लगत्तै नेपालका ७७ वटानै जिल्लामा साईकल बाट भ्रमण तयारीमा जुटिरहेका छन् । त्यस्तै उनले भनेका छन् अभियान सफल पछि पहिलो र दोस्रो यात्राका अनुभवहरुलाई समेटेर एउटा पुस्तक प्रकाशन गर्ने लक्ष्यमा समेत जुटिरहेका छन् । प्रस्तुत छ नव क्षितिज साप्ताहिकको लागी अरबिन्द्र गौतमले पैदल यात्री अभिनय कार्कीसँग गरेको बिशेष कुराकानी
तपाईको पैदल यात्रा कस्तो रह्यो ?
पैदल यात्रा बाट जीवनमा आज सम्म प्राप्त गर्न नसकिएका अनुभवहरु वटुलियो । समग्रमा भन्नु पर्दा यात्रा अविस्मरणीय र उपलब्धि मुलक रह्यो ।
मेचि माहाकाली पैदल यात्रा गर्नुको मुख्य उद्धेश्य के हो ?
विश्वभर सुख, शान्ति, समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको कामना“ सहित सय भन्दा बढी देशहरुको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर पुर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मका प्राकृतिक, भौगोलिक, मानिसहरुको धर्म सस्ंकृति, बाँसस्थान, रहनसहन, रितिरिवाजहरुलाई नजिक बाट निहालएर उहाँहरु माझ शान्तिको सन्देश फैलाउदै नजिक बाट त्यसको अध्ययन गरेर एक पुस्तक प्रकाशित गर्नु यस यात्राको मुख्य उदेश्य हो ।
पैदल यात्रा गर्दा के कस्ता कठिनाइहरु भोग्नु पर्यो ?
यात्राको क्रम्मा असहज परिस्थितिहरु धेरै आए । मैले यात्रा सम्पन्न गर्न सक्छु भन्ने दृढ विश्वास, ईच्छा शक्ति र संकल्प गरेर यात्रामा उत्रेकाले गर्दा मलाई घचघचाई रह्यो । त्यसैले सानातिना असहज परिस्थितिहरुलाई परास्त गर्दै आफ्नो पाईलाहरु अघि बढाई रहे । फलस्वरूप यात्रा पनि सफलता पुर्वक सम्पन्न गर्न सफल भए ।
तपाईलाई यस कार्य गर्न उत्साहित गराउने प्रेरणको स्रोत ?
मुलतः विश्वका प्रसिद्ध व्यक्तिहरुको जीवनीे धेरैको पढेको छु । ठ्याक्कै यहि नै हो भनेर त भन्न सकिँदैन । मेरा लागी प्रेरणाको स्रोत भनेकै म आफै हो ।
तपाइले मेचीमहाकाली पैदल यात्रा गर्दा के देख्नु के पाउनु भयो ?
यो त म शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिन । किनकी आफ्नो जन्मभुमि हो । यो विविधतामा एकता ,बहुजातजाति, भाषाधर्मलम्बीहरुले बनेको साझा फुलबारी हो भनेर बालपनमा पढेको कुरा पनि हो । अझ ति कुराहरुलाई नजिक बाट निहाल्दा यो आफैमा एक प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपुर्ण पाए ।
स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरु बाट कतिको सहयोग प्राप्त भयो ?
स्थानीय तह र सरोकारवालाहरु बाट मैले सोचेको भन्दा बढि सहयोग प्राप्त गरे । त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ यात्राका क्रममा भेटिएका सहयोगी महानुभावहरु बाट सहयोग र हौसला मिल्यो ।
पैदल यात्रा सम्पन्न गरिसकेपछि घरपरिवार आफन्त साथीभाईहरु र अरु निकाय बाट कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
यात्रा सुरु गर्दा प्रायजसो सबैले गर्न सक्दैन भन्दै थिए तर अहिले सम्पन्न गरिसकेपछि भने यि यस्तै किसिमको अन्य कामहरु गर्नुपर्छ भनेर सकारात्मक उर्जा किसिमको प्रतिक्रियाहरु पाईरहेको छु ।
के तपाईं लाई पैदल यात्रा गरेरै विश्वमा आफ्नो र नेपालको किर्तिमान राख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
विश्व किर्तीमान राख्न अवश्य पनि सकिन्छ । तर त्यसको लागि जसरी पनि कीर्तिमान राखेरै छोड्छु भन्ने दृढ संकल्प गहिरो अध्ययनका साथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
अबको योजना बनाउनु भएको छ ?
अबको योजना खास छ । म यहिँ आउदो असारको ०६ गते हाम्रै दोलखाको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल कालिन्चोक भगवतीको मन्दिर बाट बिहानको समयमा “फ्रट्रेसन, डिप्रेसन र लागू औषध दुर्व्यसनलाई त्यागौ, समृद्ध देश निमार्णका लागि युवाहरू एकजुट बनौं“ भन्ने मुलनाराका साथ नेपालका ७७ वटै जिल्लाहरु सय दिनमा पुग्ने लक्ष्य सहित साइकल यात्राको शुभारम्भ गर्ने तयारीमा जुटिरहेको छु । त्यो सँगसँगै अन्य योजनाहरु पनि बनाईरहेको छु ।
साइकल यात्राको लागि आफ्नो घर परिवार आफन्त र साथीभाईहरु बाट तपाईलाई कस्तो सहयोग छ ? अनि अरु बाट कस्तो प्रतिक्रिया पाई रहनुभएको छ ?
साइकल यात्रालाई लिएर घर परिवार र साथीभाईहरु बाट अत्यन्तै राम्रो किसिमको पुरा साथ सहयोग छ । उहाँहरु बाट पाइरहेको प्रतिक्रियाले मलाई अघि घच्घच्याउन प्रेरणा समेत मिलिरहेको छ ।